Raharaha Ravatomanga : Mitafy henatra ny Bianco -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Ravatomanga : Mitafy henatra ny Bianco
Noheverina fa tena hiady amin’ny kolikoly tokoa ny Bianco, indrindra ny tale jeneraly Jean Louis Andriamifidy tamin’ireny fihetsiketsehana sy sinema goavana nataony nandritra ny raharaha Claudine Razaimamonjy sy ny raharaha Antenimieram-pirenena ireny saingy…
Voalaza ao amin’ny lalàna fa kolikoly ny fanaovana mizana tsindrian’ila na fanomezana tombony manokana (favoritisme). Nitanila tanteraka teo amin’ny fanatanterahany ny andraikiny anefa ny Bianco nandritra ny fitantanan’ny tale jeneraliny, Jean Louis Andriamifidy. Manao valandresaka an-gazety, eny mamoaka ny tsiambaratelon’ny famotorana mihitsy aza nandritra ireny raharaha Claudine Razaimamonjy ireny ary nilahatra tamin’ny mpamoaka vaovao marim-pototra toa ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo mihitsy aza. Tsy azo antoka intsony araka izany ny Bianco noho izay fitanilana ataon’ny tale jeneraliny izay: mihazakazaka manao ny tsy tokony atao rehefa misy fitoriana mahazo mpitondra fanjakana sy ny manodidina azy, mangina ary mitavozavoza kosa rehefa avy amin’ny mpanohitra. Porofon’izany ny raharaha rehetra mikasika an’i Mamy Ravatomanga eny amin’ny Bianco.
Mitafy henatra tanteraka ny Bianco ankehitriny ary tsy manana ny hasiny sy ny hajany eo anatrehan’ny olom-pirenena intsony. Lasa « blanco » fandiovana ireo olona avy amin’ny fanoherana ity rafitra tokony miady amin’ny kolikoly ity. ny “Parquet National Financier” na PNF indray no nahavita nanao fanadihadiana sy nanao fanagiazana ny fananan’i Mamy Ravatomanga, noho ny famotsiam-bola maloto. Tokony hametra-pialana amin’ny toerany ny tale jeneralin’ny Bianco manoloana izao zava-misy izao raha mbola manana ny antsoina hoe “sens de l’honneur”. Rafitra tahaka izany ve ho hovatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola, rafitra mitanila ary azo henjehina ho manao kolikoly mihitsy aza ny mpitantana azy!